Vaovao - Fa maninona ny làlan'ny saron-tava an'ny laryngeal Kangyuan?
Laryngeal mask airway (LMA) dia vokatra mahomby novolavolaina tamin'ny tapaky ny taona 1980 ary ampiasaina amin'ny fanatoranana ankapobeny mba hametrahana làlan-drivotra azo antoka. Ny làlan-tsarimihetsika laryngeal misy kalitao tsara dia manana tombony maro, toy ny mora ampiasaina, ny taham-pahombiazana avo lenta, ny rivotra azo atokisana, ny fanentanana kely, ny fisorohana ny fahasimban'ny tenda sy ny moka tracheal. Fa ahoana no hanavahana ny kalitaon'ny LMA? Androany, raiso ny làlan-dranon'i maskara Kangyuan miaraka amin'ny fizarana tsena avo ohatra mba hanazavana ny fomba hitsarana ny kalitaon'ny làlan'ny mason-tava laryngeal avy amin'ireo lafiny telo etsy ambany.
Voalohany: Ny fitaovana an'ny Laryngeal Mask Airway
Ny fantsom-batana dia esorina amin'ny silika madinidinika madio vita amin'ny volo vita amin'ny platinum, manana mari-pahaizana ara-pahasalamana miaraka amin'ny mangarahara avo, biocompatibility tsara ary fitoniana mafy. Milamina ny faritra ary tsy ho mavo alohan'ny daty farany. Ny fihodinan'ny fantsona dia mifanaraka amin'ny rafitry ny vatan'olombelona.
Ny cuff dia vita amin'ny milina famolavolana tsindrona sy paompy fampifangaroana dinika vita amin'ny silika ranon-javatra madio vita amin'ny vongan-tsiranoka, manana fahamarinan-toerana matanjaka izy io, malefaka sy malefaka amboniny, fifandraisana mahazo aina kokoa amin'ireo marary.
Faharoa: Ny fizotry ny famokarana
Sarontava tsy miankina Kangyuan novolavolain'ny vondrona Kangyuan tamin'ny taona 2005 ary napetraka tamin'ny famokarana taorian'ny fitsapana mafy. Manana patanty maromaro izy ary manana tombony tsy manam-paharoa raha ampitahaina amin'ny saron-tava laryngeal hafa. Ireto ny dingana fototra:
1) fampifangaroana akora vita amin'ny silika: miaraka amina milina fampifangaroana fitaovana Siliconeraw misokatra mba hahazoana antoka fa mifangaro, ary ampiasao chiller rano fanovana matetika mba hifehezana ny hafanana mangatsiaka.
2) Fanamafisana fantsona: fitaovana fampidirana fantsona mandeha ho azy feno famaritana amin'ny savaivony amin'ny laser ary fiasan'ny fanapahana mandeha ho azy no noraisina mba hahazoana antoka ny haben'ny làlan-tsoratr'i Kangyuan laryngeal.
3) koronosy fanindronana cuff: mampiasa milina famolavolan-tsolika silika mandeha an-trano mandroso tanteraka, paompy fitaovana fampifangaroana mavitrika, hetsika sy masontsivana fanaraha-maso microcomputer.
4) Famatorana Cuff: ny fitaovana famoahana automatique feno dia ampiasaina mba hahazoana antoka fa ampiharina tsara ny lakaoly.
5) Fanontam-pirinty Tube: ampiasaina ny ranomainty fanamainana ara-pahasalamana, tsy misy poizina ny fanontana ary tsy milatsaka.
6) Ampifandraiso ny fantsom-bozaka sy ny fonosana ary esory ny lakaoly: ataovy milamina sy be loatra ny fifandraisana eo amin'ny fantsona sy ny cuff, tsy misy fanoherana.
7) Angony ny cuff manondro.
8) Fanaraha-maso ny endrika ivelany: ny LMA dia hojerena amin'ny tanana.
9) Famantarana ny tavy amin'ny cuff: atsofohy in-1.3 ny kapsily hizaha ny rano hitsapana raha mivoaka izy na tsia.
10) Madio sy maina.
12) Fanamafisana ny oxygède éthiléna.
Fahatelo: Karazan-dalambe misaron-tava laryngeal
Ny fizotry ny masiran'ny sarisary Kangyuan dia mamaritra ny maha-matihanina azy. Taorian'ny batisan'ny tsena sy rotsakorana 15 taona, Kangyuan dia manana laza tsara eo amin'ny tsena eropeana, amerikana ary atsimo atsimo. Ho fanampin'izay, Kangyuan dia namorona vokatra sarontava laryngeal maromaro misy fiatraikany isan-karazany amin'ny karazana marary, toy ny làlam-pandrefesana laryngeal standard, lalana iray manamafy ny lalan-drivotra laryngeal mask (ny fantson-drivotra dia mety mihodina amin'ny zoro maro nefa tsy manorotoro na mikitroka) , lalan-dranonitra saron-tava misy laryngeal misy bara epiglottis (misoroka izay karazana reflux), làlan-drindrina saron-tava misy laryngeal roa, làlan-masom-baravarankely laryngeal, sns.